6 मास्टर्स टूर्नामेंट को सबैभन्दा धेरै आश्चर्यजनक विजेता
परास्नातक टूर्नामेंट को6सर्वाधिक आश्चर्यजनक विजेताओं
मास्टर्स चैंप लिस्टमा सबैभन्दा ठूलो आश्चर्यमा गन्ती गरिँदै
1987 मास्टर्स मा जीत को लागि एक लामो चिप शॉट को पछाडि लरी मिस को लागि खुशी को लागि छलांग। डेविड क्यानन / गेट छविहरू
जब हामी परास्नातक चैंपियनहरूको सूची हेर्छौं, कुन नामको प्रायजसो अनुहार बाहिर छ? तपाईंले प्रमुख विजेताहरूको सूचीमा हेर्न आशा गर्नुभएका गोल्फहरू?
हामी सबै भन्दा आश्चर्यजनक मास्टर्स चैंपियनहरूको यो रैंकिङ संकलन गर्ने बाटो हो। हामी सबै कुराको बारेमा कुरा गरिरहेका गोल्फहरू धेरै प्रतिभाशाली थिए, तर तिनीहरूमध्ये केही साना-कोही ज्ञात छन्, र अन्य - उनीहरूको नाम अझै धेरै गोल्फ फ्यानहरूको लागि पहच्याउने योग्य छन् - मास्टर टूर्नामेंट जित्ने वादामा बाँचेको छैन।
त्यसैले यहाँ र निम्न पृष्ठहरूमा गोल्फरहरू छन्, आज, परास्नातक विजेताहरूको सबैभन्दा आश्चर्यजनक:
6. लैरी मिस
सन् 1987 मा मइजको जीत सबैभन्दा नाटकीय थियो। उनले ग्रिग नरम र सेव बेलेस्टरोसको साथ 3-राउन्ड प्लेऑफमा आफ्नो बाटो बलियो बनाउन अन्तिम प्वाइन्ट लगाए। चलो दोहोर्याउनुहोस्: मेज, जो समय मा केवल एक जीत थियो, मास्टर्स मा ग्रेग नरम र सेभ ब्लास्टरोसको विरुद्ध एक खेल थियो। उनीहरूको युगको दुई दिदीहरु। कुनै तरिका Mize जीतने जाँदै थियो! तर निस्सन्देह, उनले गरे।
पहिलो प्वालमा बल्लास्टरस सफा गरियो। दोस्रो प्लेऑफ होलमा, मिस 140 फुटबाट न्युनलाई हरायो र ग्रीन जैकेटलाई हरायो ।
मक्का उनको पीजीए टुर कैरियर मा एक यात्री थिए। 1 99 1 मा परास्नातक पछि, मेजले दुई पीजीए ट्राफिक विजेताहरूको लागि दुई गुणा बढी जित्यो।
5. ट्रेवर इमिलमन
2008 मा परास्नातक पछि ग्रीन जैकेट दान गरे पछि ट्रेवर इमेलमैन। हैरी कसरि / गेट छवियाँ
टाइम ट्रेवर इमेलम्यान 2008 मास्टर्स जीता, उनले उजुरी मा एक युवा गोल्फर बनिन्। उहाँले पहिले नै पीजीए टुरमा एक पटक जित्नुभयो, युरोपेली टूरमा तीन पटक र दक्षिण अफ्रिकाका पाँच पटकमा पाँच चोटि। उनी राष्ट्रपति राष्ट्रपति कपको दुई अन्तर्राष्ट्रिय टोलीका भाग थिए।
त्यसो भए कि मास्टर्स 2008 मा जीता एक ठूलो भविष्य को लागि एक कदम पत्थर थियो? यसले त्यो तरिका काम गर्दैन। इमेलमको क्यारियर चोटले घटेको थियो, र उनले विश्व टूर्नामेंटमा 2013 सम्मसम्म अर्को टूर्नामेंट जितेन। इमेलम्यानले एक पटक आफ्नो पीजीए टूर कार्ड गुमाए, यसलाई फिर्ता लिई, फेरि फेरि हरायो।
4. टमी हारून
टमामी हारून 2003 मा मास्टर्स खेल्दै, अगस्ट नेशनल मा विजय हासिल गरे 30 वर्ष पछि। एन्ड्रयू रेडटनटन / गेट इमेजहरू
टोमी हारूनको उपलब्धिले उनीहरूको प्रतिभालाई कहिल्यै सम्बोधन गरेन ... यसका लागि 1973 मास्टर्स च्याम्पियनशिप। यो हारून को लागी दुई दुई ट्राफिक जीतहरु मध्ये एक थियो, अर्को 1970 एटलान्टा क्लासिक मा आउछ।
तर हारूनले आफ्नो प्रतिभा धेरै अन्य तरिकामा देखाए: 1972 पीजीए अर्को प्रमुखमा एक रनर अप समाप्त भयो; उनी दुई अमेरिकी राइडर कप टोलीको नाममा थिए। उनले मास्टर्समा शीर्ष 10 मा शीर्ष 10 मा समाप्त भयो। आफ्नो क्यारियरमा, हारूनले दोस्रो पटक धेरै पटक समाप्त गरे कि उनी "वरिपरि" भनेर जान्थे।
हारूनले मास्टर्समा अर्को गोल्फरको दुर्भाग्यमा भूमिका खेले। सन् 1968 मा, रोबर्टो डी विसेनोजले प्लेफनमा भएको हुनुपर्छ, तर उनले अन्तिम गोल पछि गलत स्कोरकार्डमा हस्ताक्षर गरे। त्यो स्कोरकार्ड थियो "4" को 17 औं छेद मा जब डी विसेनजो वास्तव मा एक "3" गरेको थियो। गलत साथी चिन्ह लगाउने खेल साझेदार हारून थियो।
3. चार्ल्स केडी
चार्ल्स काडी 2002 मास्टर्स मा खेल्छ। क्रेग जोन्स / Getty छवियाँ
चार्ल्स केडीईले केवल तीन पीजीए टूर शीर्षकहरू जिते: 1964 डलास ओपन, 1969क्लिभल्याण्ड ओपन र 1979मेस्टर्स । त्यो परास्नातक शीर्षक शैलीमा आयो। केडीले दुईवटा स्ट्रोकद्वारा जैक निकलस र जनी मिलरलाई हराउनका लागि अन्तिम चार होलहरूमा दुईवटा पक्षमा राखे।
जबकि मास्टर्स उनको अन्तिम पीजीए टूर जीत थियो, केडीई बाद में चैंपियंस टूर मा पांच अधिक जीतहरु लाई पोस्ट गरे। उनले युरोपेली घटनालाई पनि गोल्फ टूर्नामेंटको सबैभन्दा खराब मौसमको लागि किंवदंतीमा हराएको छ।
2. हरमन केइजर
भुक्तानी पाउनेछ: बॉबी जोन्स (बायाँ) विजेताको जाँचले 1946 मा पराजित गर्दछ परास्नातक च्याम्पियनशिप हरमन केजर। बेटिन / गेट छविहरू
हरमन केजरले आफ्नो क्यारियरमा केवल पाँच पीजीए टूर विजय हासिल गरे, यद्यपि उनले दोस्रो विश्वयुद्धमा धेरै प्रधान वर्ष गुमाए। उहाँले युद्धको एक पटक पहिले एकपटक जित्नुभयो, र 1946 मा परास्नातक विजय सहित, युद्ध पछि चार चोटि।
आज पनि, केईजर ठूलो मात्रामा बिर्सिएको छ। उनको नाम गोल्फ इतिहास को अवतार प्रशंसकहरु द्वारा, या मास्टर्स प्रशंसकहरु को सबै भन्दा बढि द्वारा मान्यता प्राप्त छ।
केईजरले बेन होगनको एक शटको नेतृत्वमा 1946 मास्टर्सको अन्तिम हरीको सम्पर्क गर्यो, जसले केइजरको पछि एक समूहमा खेलिरहेको थियो। केइजरले 3-प्वाँट लागे ... तर चिन्ता नगर्ने, किन जब हानले अन्तिम हरियोमा पुग्यो, उनले 3-पटपिट गरे। Keizer स्ट्रोक जित्यो।
1. क्लाउड हर्मोन श्री।
क्लाउड हर्मोन श्री। 1948 मा मास्टर्स विजय को समयमा। बेटिन / गेट छविहरू
द्रुत, तपाइँ क्लाउड हर्मन को बारे मा के थाहा छ? के तपाईंले कहिल्यै उहाँलाई सुनेको छ? धेरै गोल्फ प्रशंसकहरूले उहाँबारे केही कुरा गर्दैनन्। वा, यदि उनको नामको पहिचान को अस्पष्ट भावना हो भने, यो शायद सम्भवतः वर्तमान गोल्फ प्रशिक्षक क्लेड हैर्मन III को हो। क्लाउड हैर्मन जूनियर को छोरा कौन - अक्का, धेरै प्रसिद्ध गोल्फ प्रशिक्षक बेंच हर्मोन। र बेंच 1948 को मास्टर्स च्याम्पियन क्लाउड हैर्मन एस.ए.
यो सही छ, जो 1948 मास्टर्स जीता पुरुष जो हर्मोन गोल्फ निर्देश राजवंश को अभिषेक हो, र आफनो गोल्फ प्रशिक्षक र क्लब समर्थक थिए।
तर यो सीधा प्राप्त गरौं: उनको विजयको समयमा, 1948 मा, हर्मोन विजयीले आफ्नो गोल्फ साथीहरूलाई आश्चर्यचकित गरेन। त्यो एक धेरै प्रतिभाशाली गोल्फ थियो जो भ्रमण समर्थ को तब देखि जरूरी नहीं-जरूरी दुनिया को क्लब समर्थक को स्थिरता (र गारंटीकृत पेचेक) लाई प्राथमिकता दिइयो। उनले पछि अर्को पीजीए टूर कार्यक्रम जीता, र 8 मा शीर्ष 10 खत्म पोस्ट गरे। यसमा 1959यूएस ओपनमा तेस्रो-स्थान समावेश गरिएको थियो।
तर अधिकांश व्यक्तिहरू हर्मोन आजको बारेमा जान्दछन् - यदि उनी उनको बारे केहि कुरा जान्दछन् - यो हो: उहाँ क्लब हो जुन जसले पराजित गर्यो, बिभिन्न क्लब समर्थकहरूलाई भेट्न सफल भयो। र यही कारणले उसलाई बनाउँछ, आज, मास्टर्सको सबैभन्दा आश्चर्यजनक चैंपियन।
1994 यूएस ओपन: एनी एलिसे दृश्यमा आइपुगे
केपीएमजी महिलाहरूको पीजीए च्याम्पियनशिप टूर्नामेंट
अगस्टका क्याबिन नेशनल
Ryder कप टाई स्कोरमा समाप्त हुन्छ भने के हुन्छ?
युरोपियन टुरमा बीएमडब्ल्यू पीजीए च्याम्पियनशिप टूर्नामेंट
ShopRite LPGA क्लासिक
LDS (Mormon) एकल ऑनलाइन डेटिंग साइटहरु खोज्नुहोस्
यो मेरो मेक्सिकनस पुरुषहरु को सूची मा ला frontera को रूप मा छ
थर्मल उल्टाउने बारे जान्नुहोस्
तपाईंको कृतज्ञता देखाउने7धन्यवाद बाइबल पदहरू
ब्लूफील्ड राज्य कलेज प्रवेश
के सिगारको लागि मेडिकल मर्जुआना ठीक छ?
प्रयुक्त स्कोन xB र टीसी हुनेछ ग्रेट खरीदहरू
कसरी जेनेटिक म्युटेशन ड्राइव ईभोल्युसन
किशोर मकरिया - राशिफल संकेत
बुडाराना कराट को इतिहास र शैली गाइड
डोम पेडोरो आई को जीवनी, ब्राजील को पहिलो सम्राट
के ग्याँसले एक डीजल इञ्जिनमा गर्छ
कसरि कन्जेगेट "Déjeuner" (दोपहर को भोजन को लागि)
उत्तर पश्चिमी विश्वविद्यालय प्रवेश
जटिल वाक्य वर्कशीट
प्रिन्सिपलबाट आमाबाबुको लागि महत्वपूर्ण विद्यालय सुझाव
स्टोना क्विटिन्निल्ला-पेरेजको कथा, तेजानोको रानी
क्यान्सर र मकवान माया प्रेम संगतता
सात सालको युद्ध: प्लासीको युद्ध
सबै भन्दा सामान्य ब्यालेन्स बीम कुञ्जीहरूको 8
शीर्ष 15 सबै भन्दा बहुमूल्य सुपरमैन सुपरमिक्स हास्य - टाइम